सन् १९५० को सन्धि अनुसार भारतले नेपालको ६० हजार वर्ग किमी जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने ! सेयर गरौं — SuchanaKendra.Com
सन् १९५० को सन्धि अनुसार भारतले नेपालको ६० हजार वर्ग किमी जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने ! सेयर गरौं
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७६/७/२६ गते
’भेनेजुएलाको तेलकोे सबैभदा ठूलो ग्राहक नै अमेरिका हो । तेलको धेरै भण्डार भएको मुलुुकमा भेनेजुएला पनि पर्छ । यसकै रणनीतिमा षड्यन्त्र रचेको कुुरमा कुनै शंकै नभएको उनको धारणा छ । यसबारे प्रचण्डले बोल्नुपर्ने जरुरी नभएकको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘कतार, इराकमा नाकाबन्दी हुँदा नेपाल बोलेन । भेनेजुएला प्रकरणमा किन बोल्नु ? आफ्नो जमीन सुरक्षा र पीडाको बारेमा खै बोलेको ?अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भारतलाई विस्तारवादी देश भन्दै आएका प्रचण्डले गरेका माओवादी आन्दोलन नै नाटकीय भएको उनको जिकिर छ । जनता भड्काउन, माओवादी भनेको राष्ट्रवादी हो भन्ने भ्रम फैलाउनका निमित्तमात्रै माओवादी आन्दोलन भएको उनले आरोप लगाए ।